N'ogbe Artificial turf maka football / bọl n'ọhịa 40mm Manufacturer and Supplier | Jieyuanda
Chọrọ ịma nkọwapụta njirimara nke teknụzụ nke artificial turf na ihe nlele nke ihe ntanetị nke artificial? Kedu ihe njirimara teknụzụ niile nke turf artificial pụtara? A na-eme atụmatụ na ọtụtụ ndị enyi amachaghị banyere ya. Ka anyị mee ka onye nchịkọta akụkọ nke Jieyuanda Lawn nye gị nkọwa zuru ezu banyere teknụzụ nke teknụzụ artificial na ọdịnaya a kapịrị ọnụ nke ụdị na ụdị nke turf artificial! Jieyuanda turf samples n'ozuzu nwere akụkụ ọrụaka na azụ, nke bụ nọmba ihe atụ nke turf artificial, elu nke turf artificial, ọnụ ọgụgụ nke agịga nke ihe a na-emepụta turf, na nrapado nke turf artificial.
Number nke ọ bụ nke keakamere turf:
Ọnụ ọgụgụ nke agịga na-ezo aka na ọnụ ọgụgụ nke ụyọkọ ahịhịa filament kwa square mita nke turf artificial. Onu ogugu nke a na-ejikarị n’ubi bọọlụ bu 10,500, nke putara na enwere ahịhịa adịkarị 10,500.
Yabụ, kedu ka anyị ga-esi gbakọọ ọnụ ọgụgụ nke ụyọkọ kwa square mita? Ọ bụrụ na ejiri akara agịga mara akara ahịhịa 3/4, enwere ahịrị 52.5 ahịhịa kwa mita n'obosara nke ahịhịa ahụ, ọnụ ọgụgụ nke ahịhịa ogologo na ahịrị ọ bụla bụ 10500 / 52.5 = 200 ụyọkọ, na ọnụ ọgụgụ kwa 10cm bụ ụyọkọ 20. Nke ahụ bụ ịsị, maka ahịhịa nwere paradaịl 3/4, e nwere ụyọkọ iri abụọ n'akụkụ ụzọ ogologo ya na akara ya dị 10cm, nke ya na 10500 dakọtara na square mita.
A pụrụ iji otu usoro ahụ gbakọọ usoro agịga ọkọlọtọ nke 5/8, 10500 bụ, kwa mita anọ nke 10 / 10cm, na 16.7 bụ, kwa ụyọkọ nke 10cm.
N'ikwu okwu n'ozuzu, mkpụrụ osisi turf artificial na-ezo aka n'ụdị turf, ahịhịa dị elu na ọnụ ọgụgụ nke ọ bụ. Were anyị turf wuru na 25mm elu na 16 bụ, dị ka ihe atụ. Kedu otu esi agbakọ ụkpụrụ ndị a n'ozuzu? Ugbu a, ka m gwa gị usoro ngụkọta oge nke mpaghara ahihia.
Ru turf cluster density:
Nke mbu, inwere ike ile anya n’azu ahihia nke dabere n’omume. A na-akpọ ụyọkọ ọ bụla stitch. Densityyọkọ ụyọkọ na-ezo aka na njupụta nke agịga kwa square mita, n'ozuzu 16,800 ọ bụ / square mita, 18900 bụ / square mita, agịga 22050 / square mita, n'ezie e nwere ndị ọzọ njupụta, ma ndị kasị nkịtị bụ atọ.
Kedu ka esi gbakọọ "ụyọkọ ụyọkọ"? Dị ka anyị niile maara, mpaghara nke rektangulu bụ ogologo gbatịrị n'obosara, ya mere, a na-agbakọkwa "ụyọkọ ụyọkọ" n'otu ụzọ ahụ. Arfik turf density nchigharị usoro: Artificial turf agịga nọmba X artificial turf agịga pitch. Site na nke a, enwere ike gbakọọ njupụta kwa square mita nke wuru turf.
Nọmba dị mkpa na pitch nke turf artificial:
Ogologo ụyọkọ ụyọkọ a na-akpọ ọnụ ọgụgụ nke ọ bụ, ya bụ, were onye na-achị ka ọ tụọ 10cm, wee gụọ ọtụtụ agịga dị na 10cm a, anyị na-ejikarị 16, 18, 21. A na-akpọ obosara nke ụyọkọ ụyọkọ "nkedo agịga", n'ihi na a na-ebubata igwe ndị malitere imepụta turf, ya mere, otu ahụ bụ sentimita asatọ.
Standardskpụrụ dị mma nke turf artificial na-ahụkarị site n'akụkụ atọ: ihe, njupụta na azụ gluu. Ndị a na-esote na-ewebata ihe ọ bụla akọwapụtara teknụzụ ọ bụla, yana otu esi ekpe ikpe ọnụọgụ teknụzụ nke ahịhịa ahụ dabere na nlele ahụ. Mgbe ị ghọtara ihe ọ bụla ntanetịpụtara, ị nwere ike ikpebi nkọwapụta nkọwapụta nke nlele n'onwe gị ọbụlagodi na enweghị akara.
Wuru Turf nrapado:
Wuru turf azụ mama, ugbu a ọtụtụ ndị na-eji na-ọtụtụ ihe mejupụtara na okporo ala. Ihe dị iche bụ na agbakwunyere akwa nke akwa akwa akwa na grid, nke kachasị na-arụ ọrụ nke ime ka ahịhịa sie ike.
Nkọwapụta teknụzụ a kpọtụrụ aha n'elu nke turf artificial na usoro ihe atụ nke turf artificial wuru maka onye ọ bụla. Nabata ka ị nọgide na-a attentiona ntị na Jieyuanda artificial turf!
A na-ejikarị ahịhịa artificial.
Olee otú ịhọrọ ya? Ọ dabere na ike egwuregwu na uwe akara nke ahịhịa artificial.
Ahịhịa wuru ga-abụrịrị ụdị na-adịgide adịgide ma ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ. Ahịhịa ahịhịa anyị nwere ike iguzogide uwe na akwa nke mgbanwe mgbanwe na mgbochi UV nwere njigide agba dị mma, nke a na-ejikarị na bọlbụ / baseball ubi / ogige egwuregwu na-arụ ọrụ na kindergarden wdg.